yokugezela ezivuselelwe efulethini kudinga ukunakekelwa okukhethekile. Bath - siyindawo ezinemvula eningi kunazo zonke kule efulethini, ngakho ukulungisa kumelwe sisetshenziswe kuphela nama-namanzi impahla.
Ngaphambi kokuthi uqale ukulungisa yokugezela kudingeka kuphunywe izakhiwo kusuka ifenisha, amapayipi amanzi, uma bawela labhidlika, futhi okubaluleke ahlanzekile kubhavu. Ngaphandle kwamandla owesilisa akwanele. Ngaphambi kokuqala umsebenzi udinga uyeke lingakunika amandla yokugezela yalo wavala amanzi. Uma amapayipi usumdala, ngisho steel noma yensimbi inkatho, kubalulekile ukuthatha grinders usizo.
Isinyathelo esilandelayo kuyoba ukufakwa amapayipi amasha. Wacabangela polypropylene enokwethenjelwa kakhulu nge emalungeni soldered. Kodwa metal and plastic, ezixhunywe esebenzisa omfisha, kungaholela ukuvuza.
Once wafaka amapayipi amasha, badinga ukufihla, okungukuthi, ukwenza noma yiluphi design, lapho lezi amashubhu Ingafihleka. Ngenxa yale njongo, ungasebenzisa umswakama ukumelana plasterboard. Noma yini ongayenza ngaphandle design. Khona-ke kuyodingeka ukufihla ipayipi odongeni noma phansi, udinga Strobl.
Manje ukulungiselela odongeni ukuqala ukusakaza ku tile zabo. Ngenxa yale njongo, liphinde okwakhiwa ngalo la mabhodi efanelekayo noma kakhonkolo. Yiqiniso, ukhetho lokuqala kuyindaba elula, futhi isikhathi kuyoba ngokushesha. Ngendlela efanayo qondanisa Uphahla lwangaphakathi.
Kodwa nasezinganeni out phansi uzodinga ukusebenzisa screed ukhonkolo. Khona-ke kubalulekile ukuba impregnate ukhonkolo impregnation esikhethekile amanzi-okuhlola. Ukukhethwa esitolo we impregnation omkhulu onjalo.
Uma kudingekile, shintsha wiring. Ukuze ulondoloze, ungakwazi ukuthenga izingxenye ze-inthanethi noma iphephandaba, isibonelo, iphephandaba isuka kwesinye isandla iye Ufa.
Ngokulandelayo, baqala ukubeka Tile phezu izindonga floor. Kumele kukhunjulwe ukuthi, lapho wabeka ngokhethe, imigodi phakathi substrate futhi isihloko ukuze kube kunoma isiphi isimo akufanele kube. Lokhu kusebenza kuzo zombili izindonga floor. Ekhomba emalungeni phakathi amathayili kufanele kube ukuze grout ifakiwe ngokuphelele ukujula eligcwele.
Esigabeni esilandelayo - ophahleni. Indaba for ophahleni, futhi, kufanele kube namanzi. Ngenxa yale njongo, efanelekayo panel plastic noma ophahleni, ngakho ungenza uphahla ezenziwe sephrofayela aluminium. Ukusebenzisa lezi zinto, ophahleni Akubalulekile qondanisa kusengaphambili. Kodwa indlela eshibhe - iwukuba qondanisa ophahleni ngosizo putty nopende upende okhethekile ophahleni.
Phela zibekwe, siqale ukufaka yokugezela bese uhlela ifenisha.
AK Primer 070. Le izakhiwo eziyisisekelo futhi isicelo
Finishing okwakhiwa ngalo la mabhodi balcony ngezandla
Ubani owasungula ikheshi, futhi nini?
Yiziphi izinhlobo izinja izimvu? Izinhlobo uMalusi izinhlobo
Ibanga 3 umdlavuza webele: esaphila. Ukwelashwa umdlavuza webele
Ukukhetha esihlalweni ephezulu wasekela